China Vatengi Stickers Kugadzira uye Fekitori | Tai mukati
Ita kuti ndangariro dzako dzinamatire nekushandura ako ese aunofarira mafoto kuita zvitambi. Dzinonamira dzakasimba asi dzinobvisa dzakachena, dzichisiya zvisaririra kumashure. Enderera mberi nekunamatira nguva dzako dzakabatwa zvakanyanya pane yako laputopu, bhuku rekunyora kana chero kwaunoda. Iwe unogona kugadzira yakasarudzika Photo Stickers pamapeji uye inokwana akawanda mafoto sezvaunoda, kana kuraira imwe chete kuti uedze!
Gadzira mapeji uye mapeji etsika mapikicha ezvimedu ipapo pamunwe wako! Nawe StickerYou wepamhepo mupepeti, kugadzira zvitambi mune chero tsika chimiro kana saizi yaunoda hazvina kumbove nyore. Zvese zvedu zvekunamira mapikicha zvinogadzirwa nemhando vinyl, saka ako mafoto achiri kutaridzika kupinza zvisinei nekwaunoda kuti vanamatire. Zvakanakisisa pane zvese, edu echinyakare mapikicha ekuteedzera ndeye microwave uye yekuwachira yakachengeteka, ichivaita chakakwana chakakwana chishandiso chekugadzirisa chero chinhu uye zvese zvaunogona kufunga nezvazvo. Ipa zvipo zvisingakanganwike kana kuzvikomberedza neako anonamatwa zviitiko nemapeji ako etsika mapikicha.
Mashoko Pepa, Chena / yakajeka PVC, holographic zvinhu
Saizi chero saizi iripo
Dhizaini sezvo wako magadzirirwo.
Ruvara Ruvara ruzere / Pantone mavara / CMYK ruvara
Kupedza Gloss lamination. varnish, kupisa kutsika, Bronzing, uye UV
Kurongedza Kurongedza muhombodo dzeOPP, ine mabhokisi akasimba ane bhokisi panze kana sekudiwa kwemutengi
Sample muripo Zvinoenderana nesaizi uye kudhinda uye kupedzisa zvinodiwa .Tichazofunga kudzosa muyero wekuchaja kana iwe ukaisa odha. Asi isu zvakare tinogona kunyorera yemahara sampuro iri muchitoro. Zvisinei mutoro unobhadharwa newe.
Kugadzira Lead Nguva Zvinoenderana neQty, kazhinji ingangoita mazuva 7-10
Mutengo wechikamu Kubva pane zvigadzirwa 'zvigadzirwa, hukuru hwakawanda, kudhinda chinodiwa uye kurongedza maitiro.
Mari yekubhadhara T / T, Western mubatanidzwa, Paypal nezvimwe
Pashure: Sticker Rolls
Zvadaro: Bhizinesi Stickers
Bvisa Goridhe Pazasi Peta Cupcake Mabhokisi
Kisimusi Chipo Bhokisi, Corrugated Carton Bhokisi, Yekusimudzira Bhegi, Chipo Bhokisi, Kukwidziridzwa Chipo, Lamination Chipo Bhokisi,